Triac Control Voltaji na-edozi
USB Type-C, nzipu ike na ike mmemme
Ejila ihe owuwu nke USB (Universal Serial Bus) mee ihe dịka ọkọlọtọ maka njikọta na akara ngosi ha metụtara na nnyefe ike kemgbe 1996. N’oge a enwere ọtụtụ mgbanwe na nkọwa iji melite arụmọrụ nke sistemụ na-eji ụkpụrụ ndị a. Mbubreyo ...
USB chaja (Nyefe Ike USB)
USB sitere na interface data nwere ike inye ike na ikike nke nwere isi data. Taa ọtụtụ ngwaọrụ na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ nweta ike ha site na ọdụ ụgbọ USB ndị dị na laptọọpụ, ụgbọ ala, ụgbọ elu ma ọ bụ ọbụna mgbidi mgbidi. USB abụrụla ebe dị ike maka ọtụtụ s ...
USB-C na nnyefe ike na-akọwa
Odi na ihu PD Gan chaja bu uzo ohuru ohuru: USB-C na USB-C Power Delivery. Nke mbụ bụ naanị ọdụ ụgbọ USB-C nke na-arụ ọrụ site na iji ọkwa USB 3.1 kachasị ọhụrụ na elekere 3 amps. The abụọ na-akwado a ike ngwa ngwa Nchaji technology akpọ Power Delivery. Nyefee Ike (PD) m ...
USB PD & -dị-C chaja ụlọ ọrụ ozi
USB PD & Type-C Asia Display Charging Head Network bidoro ihe omume iji kwalite ụlọ ọrụ na-ebugharị ngwa ngwa, nke emere maka nnọkọ 12. N'ime afọ ise gara aga, ụlọ ọrụ na-ebugharị ngwa ngwa nke Charging Head Network mere nke meriri ịnụ ọkụ n'obi nke ndị ọzọ ...
The Development Trend nke GaN USB chaja
GaN (gallium nitride) chaja ike nwere ọnụnọ dị ịrịba ama na CES na 2020 - na-egosi na afọ a ga-ahụ mmasị na nnabata ndị a na obere obere, ngwa ngwa ngwa ngwa, na ngwaọrụ ndị na-arụ ọrụ ike karịa. Ọkara n'ime afọ, enwere ọtụtụ ihe akaebe na nke a bụ ikpe. Ihe pro ...
N'oge na-adịbeghị anya, ọhụụ ọhụrụ nke Huawei nke ogologo oge na-atụgharị anya na ekwentị mkpanaaka Mate X2 emechaala pụta. Ekwentị mkpanaka a dị ọnụ ala ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 3000USD nwere usoro 5nm Kirin 9000 flagship processor. Mgbe emechara, nha ihuenyo ruru 8 sentimita asatọ. Ọ na - anabata ...
Chọrọ ikike ọzọ, mana ọsịsọ? Ihe ohuru ohuru nke GaN na-ekwu na o nwere ike ịnaputa
Oge ị na-agagharị brik brik buru ibu na ọtụtụ eriri iji mee ka ngwaọrụ gị tụgharịa nwere ike ịbụ na njedebe. Ichere oge ka ekwentị gị ma ọ bụ laptọọpụ na-akwụ ụgwọ, ma ọ bụ iju gị anya site na chaja dị egwu, nwekwara ike ịbụ ihe gara aga. GaN teknụzụ dị ebe a ma ọ na - ekwe nkwa ...
Kedu ihe nnyefe USB?
Otú ọ dị, mbipụta a nke ndakọrịta na-achọ ịbụ ihe gara aga na iwebata nkọwapụta Ike USB. Nyefee Ike USB (ma ọ bụ PD, maka nkenke) bụ otu ọkọlọtọ na-akwụ ụgwọ enwere ike iji ya gafee ngwaọrụ USB. Nọmalị, ngwaọrụ ọ bụla nke USB boro ebubo ga-enwe nke ha ...
Gallium Nitride bụ ọnụọgụ abụọ III / V kpọmkwem bandgap semiconductor nke kwesịrị ekwesị maka ndị transistors nwere ike ịrụ ọrụ na oke okpomọkụ. Kemgbe afọ ndị 1990, a na-ejikarị ya eme ihe na ọkụ ọkụ (LED). Gallium nitride na-ewepu ọkụ na-acha anụnụ anụnụ eji maka ịgụ diski na Blu-r ...